သံစဉ်မဲ့ အလင်္ကာများ: February 2007
ဟိုိတောင်က မိုး….. ။
စာရေးသူ--> AinChannMyay~ (စာတင်ချိန်) 3:14 PM No comments: သက်ဆိုင်တာလေးတွေ
စာရေးသူ--> AinChannMyay~ (စာတင်ချိန်) 10:19 PM3comments: သက်ဆိုင်တာလေးတွေ
ခရမ်းရောင်ညမီးအောက်မှာ စီရီနေတဲ့ စာအုပ်စင်ရှိတယ်..
ခပ်လှမ်းလှမ်းက မြစ်တစ်ဖက်ကမ်း တောင်ကုန်းမြင့်ပေါ်မှာ
ကိုယ့်အခန်းထဲကို ၀င်တဲ့ တံခါးကတော့ သော့ကြီးကြီးနဲ့ခတ်ထားသတဲ့
ဟုတ်တယ်.. ခွန်အားတွေကို တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်ခြင်းက ရတတ်တဲ့
Introvert တစ်ယောက်ရဲ့ ထုံးစံအတိုင်းပေါ့..
တွေးမိပါတယ်..လွမ်းရတဲ့နေရာလေးတစ်ခုမှာ အရင်လို သံချိုလွှမ်းတဲ့တေးတွေ
၀တ်ခဲ့ဖူးတဲ့ အစိမ်း နဲ့ အဖြူ၊ ငယ်ရွယ်နုပျိုသူတွေရဲ့ ရင်ခုန်ခြင်းတွေနဲ့ ပြည်ထောင်စုနေ့သီချင်း
နှင်းဝေတဲ့ ကုက္ကိုလ်တန်းဘေးမှာ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ကြိုခဲ့ဖူးတဲ့အလံတော်
တကယ်ကို အတော် ဝေးခဲ့ပြီပဲ..
ကို tesla ရဲ့ ကဗျာလေး
သူ့ ကဗျာထဲကလို pro တစ်ယောက်မဟုတ်ပေမယ့်
ဒါပေမယ့် ကြားရတဲ့သတင်းတွေက အလွမ်းကို နာကြင်ခြင်းနဲ့ မေ့ပျောက်ရမလို
ကိုယ်ပြန်လာချင်ပါတယ်.. ဒါပေမယ့် …ဒါပေမယ့််လေ….
နှလုံးသားတွေရဲ့ လွတ်လပ်ခြင်းတေးတွေသီကုံးခွင့်နဲ့ 
မတူညီမှုတွေကို နားလည်လက်ခံမှု တခုကို ....
ခေါင်းအုံးဘေးက ရောင်စုံစုတ်တံတွေနဲ့ အနီရောင်စာအုပ်လေးကလဲ..
အရောင်စုံတဲ့ ပန်းချီကားတစ်ချပ် ချယ်သခွင့်ပြုမယ့်နေ့ ကို….
စာရေးသူ--> AinChannMyay~ (စာတင်ချိန်) 2:59 AM No comments: သက်ဆိုင်တာလေးတွေ
စာဖတ်သူများ ဒီပုံပြင်လေးကိုကြားဖူးကောင်း ကြားဖူးပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမဲ့ မကြားဖူးတဲ့ လူတွေကို ရည်စူးလို့ဝေမျှလိုက်ပါတယ်။
တခါက မြို့လေးနှစ်မြိုနားမှာ အလွန်စည်းစနစ်ကျပြီး သက်တောင့်သက်သာရှိတဲ့ အိပ်ရာတွေနဲ့ စားသောက်ဖွယ်ရာ အဆင်ပြေအောင်စီစဉ်ပေးတဲ့ “ထောင်”တစ်ခု ရှိပါတယ်။
အဲဒီမြို့လေးနှစ်မြို့အလယ်မှာ မြစ်တစင်းကသွယ်ဝိုက်စီးဆင်းနေတယ်။ တမြို့မှာတော့ “က”နဲ့ “ခ”တို့စုံတွဲ အတူတူ နေကြတယ်။ “က”ကအရမ်း အလုပ်ကြိုးစားတာ မနက်အစောကြီး မိုးမလင်းခင်ထဲက အိမ်ကထွက်သွားလိုက်တာ ညတော်တော်မိုးချုပ်မှ အိမ်ကို ပြန်လာလေ့ရှိတယ်။ အိမ်ပြန်ရောက်ရင်လဲ အိမ်မှာ အလုပ်ဆက်လုပ်လေ့ ရှိတယ်။ နေ့စဉ်နေ့တိုင်း“က” အိမ်က ထွက်သွားတာနဲ့ “ခ”ကဇက်စီးပြီး မြစ်ကိုဖြတ်လို့ တဘက်ကမ်းက သူ့ချစ်တဲ့ “၏”ထံ သွားလေ့ရှိတယ်။ “ခ”နဲ့“၏”နဲ့တနေ့လုံး အတူတူနေပြီး ညနေစောင်းလို့“က” ရောက်ခါနီးမှ “ခ” က အိမ်ကိုအမြန်ပြေးပြီး ထမင်းဟင်းချက်တယ်။ “က”နဲ့“ခ”ဟာ ညစာကိုလဲ ဘယ်တော့မှ အတူစားလေ့မရှိဘူး။
အဲဒီမြို့လေးနှစ်မြို့နဲ့ တမိုင်လောက် ဝေးတဲ့မြစ်စုန်ဘက်မှာ တံတားတခုရှိတယ်၊ အဲဒီတံတားရဲ့အောက်မှာ အိမ်ခြေမဲ့တဲ့ သူတောင်းစားတယောက်က တံတားကို ဖြတ်သွားဖြတ်လာ လူတွေကို ငွေအမြဲတောင်းတယ်။ ငွေမပေးရင် ဖြတ်ခွင့်မပေးတဲ့ ပုံစံမျိုးနဲ့ နှောက်ယှက်လေ့ရှိ်တော့ လူတွေကလဲ နဲနဲပါးပါးစွန့်ကြဲကြတယ်။ မြစ်ထဲကဇက်ကလဲ တနေ့လုံးမှာမှ နှစ်ခါထဲ ဆွဲတယ်တဲ့။
တနေ့တော့ “က”က အလုပ်ကိုတော်တော်နောက်ကျပြီးမှ ထွက်သွားတယ်။ “က”ထွက်သွားတာနဲ့ “ခ” က ဇက်အမှီမြန်မြန် ပြေးရတော့တာပေါ့။ “ခ”က အလျှင်လိုနေတာနဲ့ အင်္ကျီမှားဝတ်သွားတာ ဇက်ဆိပ်ရောက်မှ ဇက်ဖိုးက အသွားအတွက်ပဲ လောက်တာ သိလိုက်တယ်။ သူကစိတ်ထဲမှာ ခပ်ပေါ့ပေါ့ပဲ ဘာလို့လဲဆိုတော့ အပြန်ခရီးစရိတ် တယောက်ယောက်ဆီက ချေးလို့ရမယ်လို့ စဉ်းစားမိလို့ပဲ။
ဖြစ်ချင်တော့ အဲဒီနေ့မှာ “ခ”နဲ့“၏”တို့အကြီးအကျယ် ရန်ဖြစ်ကြတယ်။ တနေ့လုံး ငြင်းခုံနေကြတာ ညနေ “ခ”ပြန်ခါနီးမှ လမ်းစရိတ် မရှိတာသတိရတယ်။ “၏”ကစိတ်ဆိုးနေလို့ လမ်းစရိတ် မပေးပဲ ကပ်နေခဲ့တယ်။ “ခ”လဲဇက်ဆိပ်ကိုသွားပြီး ဇက်မောင်းသမားကို အကူအညီတောင်းပေမယ့် အရာရာ စည်းမျဉ်းဘောင်ထဲကလုပ်တဲ့ ဒေသဆိုတော့ ပေါ်လစီနဲ့မကိုက်ညီလို့ ဇက်သမားက အကူအညီ မပေးနိုင်ကြောင်း ပြောလိုက်တယ်။
ညနေကလဲ စောင်းလာပြီ။ “က”ကလဲ အိမ်ပြန်ရောက်တော့မယ်။ ထမင်းဟင်းတွေလဲ အဆင်သင့် မဖြစ်သေးတော့ စိတ်ပူပန်မှုတွေနဲ့ နောက်ဆုံး တံတားကဖြတ်ပြီး လမ်းလျှောက်ပြန်ဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။
ညရောက်တော့ အိမ်ပြန်မရောက်လာလို့ “က”က လူပျောက်မှုနဲ့ ရဲကိုတိုင်တယ်။ နောက်တနေ့မှာတော့ “ခ”ရဲ့အလောင်းကို တံတားနားမှာ တွေ့လိုက်တယ်။ သက်ဆိုင်ရာတွေက စုံစမ်းစစ်ဆေးတော့ အိမ်ခြေမဲ့က သူသတ်တာပါလို့ ဖြောင့်ချက်ပေးလိုက်တယ်။
စာဖတ်သူတို့အနေနဲ့ jury လူကြီးတစ်ယောက်ရဲ့နေရာမှာ ဆိုရင် “ခ”သေရတာ မည်သူ့မှာ တာဝန်ရှိတယ်လို့ ထင်မြင်ယူဆပါသလဲ။
ပုံပြင်လေးရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ ဘယ်ကိစ္စကိုမဆို တယူသန်တသတ်မှတ်ထဲ မကြည့်ကြဖို့၊ ရှိတဲ့ information လေးကိုပဲဆွဲယူပြီး ဆုံးဖြတ်ချက်အလောမကြီးကြဖို့၊ critical thinking အတွက်ရည်ရွယ်တဲ့ ပုံပြင်လေးပါပဲ..…
မိမိရဲ့ မွေးဖွားကြီးပျင်းလာမှု ပတ်ဝန်းကျင်၊ ယဉ်ကျေးမှုအစဉ်အလာတွေ အပေါ်မှာ မူတည်ပြီး တစုံတရာကို လေ့လာသုံးသပ်တတ်မှုတွေ၊ ယူဆမှုတွေ၊ အမြင်တွေ ကွဲလွဲသွားပုံတွေကို အံ့မခမ်းတွေ့ ကြရပါလိမ့်မယ်..
Adapted from one of the projects used in P300
စာရေးသူ--> AinChannMyay~ (စာတင်ချိန်) 12:43 AM5comments: သက်ဆိုင်တာလေးတွေ
ခါးသက်သက်နဲ့ .. အလှဲ့ စောင့်နေတယ်..
အပြာရောင်မှန်ပြင်သား၊ ကာလရထားခပ်တိုးတိုးနဲ့ 
အခိုးငွေ့ ရိုက်လို့ ၊
ဟို့ နှစ်ကတော့ Role Model၊ ဒီနှစ်တော့ Quality Performerတဲ့
မင်းမရှိတဲ့ ဘ၀မို့ ပါ..
Cultural capital… human capital
ဘာ ကယ်ပီတယ်မှ နှယ်နှယ်ယယမရှိ
ဒေါသတွေ၊ မောဟတွေ၊ အတ္တတွေ
အောင်မြင်ခြင်းတွေ၊ ကျဆုံးခြင်းတွေ ကိုထားလို့ 
ကိုယ်တိုင်(Calculator မပါပဲ) တွက်ထားတဲ့..
သုံးသောင်းတစ်ထောင်နဲ့ နှစ်ဆယ့်ငါးရက်ကို စောင့်မယ်…
Scholarly article ရေးနေတာလဲမဟုတ်ပါဘူး
ရင်ထဲက အနာတွေ၊ ကာဗာလှစ်ပြရုံပါ
လူ့ဘ၀ရဲ့ တစ်ဝက်မှာ traffic ထဲ ထိုင်နေရတဲ့ဘ၀
Mitral valve leakage နဲ့ ကော်ဖီနဲ့ မတည့်ဘူးလို့ 
မမြင်ရတဲ့ အသည်းတစ်ခု၊ ကွဲခဲ့တာအခုမှ မဟုတ်တာ
ဒါဆို ဘာကို diagnose လုပ်မှာလဲ…
ခပ်အေးအေးပဲ နေချင်တဲ့၊ နေတတ်တဲ့ငါ
အိမ်ကိုပြန်မရောက်ခင်… မင်းနဲ့ ပြန်မတွေ့ ခင်အထိ
စာရေးသူ--> AinChannMyay~ (စာတင်ချိန်) 12:55 AM6comments: သက်ဆိုင်တာလေးတွေ